Gobollada juqraafiyeed ee Kolombiya, meeqo ayaa jira? | Safarka Absolut
Si rasmi ah loogu yaqaan Jamhuuriyadda Kolombiya, Kolombiya waa waddan laga heli karo waqooyiga-galbeed ee Koonfurta Ameerika. Iyada oo in ka badan 1.600 kiiloomitir oo dhul xeebeed ah oo ay ku maydhaan badda Kariibiyaanka iyo 1.300 kiiloomitir oo ku teedsan Badweynta Baasifigga, waxaan ka helaynaa dhowr gobollada juqraafiyeed ee Kolombiya.
Waa inaan xisaabta ku darsanaa si aan u ogaanno sababta Kolombiya loogu yaqaanno, wax kasta oo ka sarreeya, iyada noocyo kala duwan oo ah dhir iyo xayawaan gobolladeeda kala geddisan, taas oo labalaab u ah Faransiiska, oo ay ku jiraan kuwa la yaqaan jasiiradaha Providencia iyo San Andrés.
1 Immisa gobol ayey leedahay Kolombiya?
2 5ta gobol juquraafi ahaan Kolombiya
2.1 Xeebta Karibiyaanka
2.2 Xeebta Baasifigga
2.3 Gobolka Andean
2.4 Gobolka Bari Bannaan
2.5 Gobolka amazon
Immisa gobol ayey leedahay Kolombiya?
Kolombiya waxay ku jirtaa xaalad juqraafiyeed mudnaan leh: waxay ku taal waxa loo yaqaan altiplano (dhul ballaadhan oo baaxad weyn leh oo dhererkiisu weyn yahay) waqooyiga Andes. Aaggan ayaa ah halka aan ka heli karno Bogota, caasimadda dalkan cajiibka ah oo ay intiisa badan dadku ku urursan yihiin.
Gobollada juquraafi ahaaneed ee Kolombiya waxaan ka heli karnaa waxyaabo is-khilaafsan oo kala duwan sida, tusaale ahaan, buuraha dhaadheer ee barafka buuran ee buuraha gudaha u dhexeeya waxay ka sarreeyaan kaymaha ay ka buuxaan dhirta ubaxyada ahi Dhanka kale, muuqaalka dhulka miyiga ugu dhaqanka badan, oo ah halka ay dadku ku beeran jireen qaxwada iyo galleyda, waxay ku jireen meelaha ugu hooseeya.
Waxaan la kulannaa waddanka ugu badan ee ku hadla Isbaanishka Koonfurta Ameerika, oo dadkiisa loo qaybiyo inta lagu kordhiyo shan gobol oo kaladuwan, meelaha ugu wanaagsan magaalooyinka waaweyn.
Marka, 5-ta gobol juquraafi ee Kolombiya waa: xeebta Kariibiyaanka, xeebta Baasifigga, gobolka Andean, gobolka Bari Bannaan iyo gobolka Amazon. Mid kasta oo ka mid ah waxaan ka heli karnaa waxqabadyo kala duwan oo gaar ah oo naga caawin doona inaan fahamno dhinacyada ugu muhiimsan ee gobol kasta.
5ta gobol juquraafi ahaan Kolombiya
Hoos waxaad ku haysaa liis iyo sharraxaad leh astaamaha ugu waaweyn ee mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah gobollada juqraafiyeed ee Kolombiya.
Aagga xeebta iyo seerayaasha in laga helo gudaha gudaha gobolkan, oo ka mid ah lafdhabarta Andes ee ku badan waqooyi iyo Kaarabibiyada, waxaa si tartiib ah u hareereeya dabeecad gebi ahaanba sixran. Halkan ma awoodi doonno inaan ka helno buuro dhaadheer in ka badan 300 oo mitir oo ka sarreeya heerka badda, marka laga reebo kuwa Sierra Nevada ee Santa Marta.
Gobolkan waxaa ka buuxa durdurro, marsooyin (dhiiqo), wabiyaal, wabiyaal iyo bannaano kuwaas oo cabirkooda iyo qaababkoodu si isdaba joog ah u kala duwan yihiin. Haddii aan booqano gobolkan, waxaan ka faa'iideysan karnaa cimilo diiran oo u horseedda ciidda inay lamadegaan qayb weyn oo ka mid ah jasiiradda "La Guajira".
Gobolkan Kaariibiyaanka ah waxaan ka heli doonnaa magaalooyin caan ah sida Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, San Andrés Island iyo Antigua Providencia, iyo sidoo kale dhowr fure iyo jasiirado kuwaas oo qayb ka ah aagga Kariibiyaanka ee dalkan. Inta kale ma ogtahay Jasiiradaha Kolombiya?
Gobolkan, waxa ugu soo jiidashada badan dareenkeenu waa iyada hawdka xeebta oo ay ku wareegsan yihiin mangroves, leh mid ka mid ah cimilada ugu xoogan wadanka Kolombiya. Waxay ku fadhidaa aag ballaaran oo dalka ka mid ah soohdimaha Panama iyo Kolombiya safarka wadanka ee koonfurta Ecuador.
Waa aag si caddaalad ah u go'doonsan, kaas oo u oggolaanaya noolaha deegaanka iyo badda hawdka ah, ee aan halkaan ka heli karno, inay aad u firfircoon yihiin. Gobolkan waxaan ka heli karnaa gobolada lagu yaqaan magaca Chocó, Cauca, Valle iyo Nariño.
Waa gobol nabdoon oo dadkiisu yaryahay oo leh hal magaalo oo dhaqaale ahaan firfircoon: Buenaventura Halkan waxaa ku yaal dekedda ugu muhiimsan ee dalka, halkaasoo inta badan soo dejinta iyo dhoofinta lagu sameeyo aagga Baasifigga.
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa deked kale Xeebta Tumaco, ee gobolka Nariño, meesha aan ka arki karno jasiiradaha Malpelo, Gorgonilla iyo Gorgona, kaas oo sidoo kale ka tirsan gobolkan dalka Colombia.
Arrintan Gobolka Kolombiya Waa halka aan ka heli doonno dad badan iyo, sidoo kale, tiro aad u badan oo dhul buuraley ah oo ay leedahay Andes, sidaa darteed magaca gobolkan. Ma yahay bedku wuxuu daboolayaa saddexda saf ee buuraha, oo gaadhay heer sare oo horumar bulsho iyo dhaqaale ah inkasta oo uu ku sugan yahay dhul buuraley ah oo sidan ah.
Gobolkan waxaan ka helnaa magaalooyinka waaweyn ee dalka, oo ay ka mid yihiin caasimada Bogotá, barta u leexashada horumarka heerar badan oo ka mid ah waddanka Kolombiya. In kasta oo aan joogno dhul buuraley ah, waxaan ka heli karnaa aagag kala duwan oo ka mid ah kuwa caanka ah "Beerta Qaranka ee Cocuy”, Halka aan ku qaban karno waxqabadyo kala duwan sida jidadka caadiga ah iyo kuwa isboortiga sida kayak, godka, iwm.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato, halkan ayaan kaaga tagi doonaa adiga suxuunta caadiga ah ee gobolka Andean.
Gobolka Bari Bannaan
Kuwani "Bannaanka bariga”Waxay yihiin bannaanka Kolombiya iyo Venezuela, oo sameeya savannas ee Wabiga Orinoco. Gobolkan waxaan ka heli karnaa gobolada Arauca, Casanare, Vichada iyo Meta. Faa'iidada ay dad badani ka helaan bannaannadan waa dadkooda tirada yar, badankoodna waxay degeen Bariga Cordillera.
Meelahan waxay heleen xiiso weyn, waqtiyadii ugu dambeeyay, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan goobaha saliida laga helay Degaanada Arauca iyo Casanare. Meelahan waxay soo jiiteen deganayaal badan oo cusub gobolkan iyagoo ujeedkoodu yahay inay ka faa'iidaystaan ​​oo ay kordhiyaan horumarintiisa dhaqaale.
Waxaan sidoo kale heli karnaa magaalada loo yaqaan "albaabka horeMeelahan ku yaal aagga Kolombiya, magaalada Villavicencio, oo sidoo kale ah caasimadda gobolka Meta. Waxaan sidoo kale heli karnaa magaalooyin sida Acacías iyo Villanueva, taas oo aan ku fulin karno hawlo kala duwan oo nagu xiraya dabeecadda isla markaana kor u qaadaya nasashada iyo goynta.
Waa mid ka mid ah gobollada ugu caansan waddanka Kolombiya adduunka oo keliya mana aha oo keliya aaggiisa ballaadhan, oo ka weyn gobolka Bannaanka bariga iyo gobolka ugu yar dadka oo dhan, laakiin dhammaan xayawaanka iyo dhirta aan ka heli karno.
Waxaan la kulannaa a gobolka in ka badan 200.000 oo kiiloomitir oo laba jibbaaran, taas oo aan ka heli karno bulshooyin asal ahaan u badan oo ku nool agagaarka dhammaan wabiyada ka gudba kaymaha Amazon ee kor ilaa hoos. Daboolaya gobolada Caquetá, Putumayo, Guanía iyo Amazonas, iyo kuwo kale, halkaasoo deganayaasha gobolka dambe ay yihiin tirada guud ee gobolkan.
Cimiladeeda waa mid joogto ah sanadka oo dhan: kuleylka ayaa caqabad ku ah ganacsiga iyo xoolaha beeraha, halka qoyaanka iyo roobabku aad u sarreeyaan dhammaan bilaha sanadka. Gobolkan waxaan ka heli doonnaa a magaalada loo yaqaan "Leticia", kaas oo fuliya laba hawlood: inay tahay caasimada gobolka Amazonas iyo, iyaduna, yeelashada deked ku taal wabiga Amazon oo ay ka socoto dhaqdhaqaaq sare
Magaaladan Kolombiya, in kasta oo ay yar tahay, haddana waxaa tirokoob ku dhow 37.000 oo qof ku nool, mana aha oo keliya dhalashada reer Kolombiya. Aaggan waa barta loo yaqaan “Saddex Xuduudaha”, Waa aag meesha Kolombiya, Brazil iyo Peru way kulmaan.
Aaggan, dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee Leticia waxaa ka mid ah inay tahay barta wax iibsiga iyo iibinta, mahadnaq dekeddeeda, dhammaan kalluunka kuleylaha ah ee lagu qabto aaggaas oo u adeegaya marinka dalka iyo qaaradda ee kalluunkan.
Aagga Amazon waxaad sidoo kale ka heli kartaa tacabiiro kala duwan oo aad ku dhex noolaan karto waddooyin kala duwan, maariqyo sida Angostura ama gudaha Beerta Qaranka lafteeda. Chiribiquete, kaas oo leh dhul aad u ballaadhan oo aan cidina kuu xaqiijinaynin dhammaan noocyada dhir iyo xayawaan ee aad ka heli karto.
Miyaad horeyba u ogayd waxa gobollada juqraafiyeed ee Kolombiya? Kee doorbideysaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Gobollada juqraafiyeed ee Kolombiya
Gobolka Andean waa Nevado del Cocuy, 20kii sano ee la soo dhaafay waxaa lumiyay ku dhowaad 40% oo baraf ah sababo la xiriira kululaynta adduunka, dhalaalkan wuxuu cabsi gelinayaa gobolka, sidoo kale wabiga loo yaqaan 'Tota lagoon' wuu ku qallalaa warshadaynta awgeed.
Boggan wuxuu ila muuqdaa mid ila fiican maadaama aan wax ka baran karno dhammaan gobollada juquraafi ahaaneed ee Kolombiya halkaas oo ay ku muujinayaan waxyaabo gaar ah iyagoo soo bandhigaya xisaabaad cilmiyaysan oo si ku meel gaar ah aad ugu horumarsan bulshada necrisising ee meeraha dhulka.
Ku jawaab daniel347
Macluumaadku aad ayuu u wanaagsan yahay laakiin waxaa ka maqnaa dhinacyada juqraafi ahaaneed ee aadanaha
Waxaan codsanayaa saxarada chichi dijo
Ku jawaab pedito caca chichi
Waxaan helay shuban-shuuraa
Sofea xitaa haddii ay ahayd waxay igu qiimeeyeen 4.0 iyagu ima qiimeynin 1.0 boi aser popo ee boggooda
Waxaan ubaahanahay inaan dhigo khariidada gobolada laakiin hadii kale way fiicnayd
Ku jawaab RUTH
garoonka ana maria dijo
Waxa ugu xun ee ku saabsan pajiana waa estoooo guacatelaa hahaha, waa run, waxba kama sheego Colombia.
Jawaab ana maria campo
waad ku mahadsantahay sameynta goboladaas si aad u caawiso walaalahay mahadsanid
Jawaab maria camila garzon gil
fiiri haddii aad rabto qoraalka carruurta ee ku saabsan ereyga:
waa gg ff e
waxaa loo yaqaan baranbaro
Aad baad ugu mahadsan tihiin mahadsanid boggan waxaan awooday inaan helo wixii aan doonayay, waad ku mahadsan tahay waxtarka ay boggan na siinayaan
Ku jawaab heilen paola
colombia cajiib ah …… ♥
saboolka ayaa qaldan kuwa dhaha in boggan xun yahay waxaan u maleynayaa inay yihiin xisbiyada toads
waad ku mahadsantahay barashadaas
Ku jawaab maría jose herrera RODRIGUEZ
Eeyaha iyo bisadaha dijo
Hagaag, runtii waan ka helay, mahadsanid
Ka jawaab bisadaha iyo eeyaha
Cinthiya waa vova ama ma ogtahay waxa ay qortay: (
Ku jawaab Carlos Alberto
Wanaaggan wanaagsan wuxuu leeyahay waxa aan u baahanahay
Waa wax aad u wanaagsan oo qofku helo waxyaalo wanaagsan.iyo sida mid kasta oo ka mid ah gobollada uu ku sifeeyo.
haye sidee tahay maxaad sameyneysaa
Ku jawaab valeria cano medina
WAX KASTA OO AAN KA OGAAN KARNO HALKAN
Ku jawaab angela brochero